Truths Inside The Bible: बर्नबास "सान्त्वनाको पुत्र"
बर्नबास "सान्त्वनाको पुत्र"
नोभेम्बर १९, २०१५
(बिजय प्रधान, बाइबलभित्रका सत्यताहरू, पो.ब.नं. २५७६८ काठमाण्डौं, नेपाल। इ-मेल: brjlpradhan@gmail.com)
चाबि पद: प्रेरित ४:३६-३७
यि पदहरूमा हामी पहिलो पटक बर्नबास नाम भएका व्यक्तिलाई देख्न सक्छौं। बाइबलको यो समयमा यस व्यक्तिले आफ्नो जमिनलाई बेचेर प्रेरितहरूको खाँचोहरू पूरा गर्न सहायता गरेका थिए।
बाइबलमा हामी बर्नबासको बारेमा धेरै पढ्न नपाएतापनि, परमेश्वरले यस व्यक्तिलाई महान् कार्यको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको देख्न सकिन्छ। यिनै व्यक्तिको बारेमा र परमेश्वर प्रति यस व्यक्तिको सेवाकार्यको सम्बन्धमा केही कुराहरू हेरौं।
बर्नबासको नामको अर्थ "सान्त्वनाको पुत्र" हो। सान्त्वनाको अर्को अर्थ ढाडस पनि हुन्छ। यि व्यक्ति पावलका सहयोगी थिए, यसैले उनलाई भन्दा पावललाई बढि केन्द्रित बनाईएको हो। बर्नबासले नयाँ विश्वासीहरुको हेरचाह गरिरहेका थिए भन्ने कुरा प्रेरित ९:१-६, २६-२७ मा पढ्न पाइन्छ।
एउटा ख्रीष्टियानको रूपमा हामीले नयाँ चेलाहरूलाई तयार पार्नुपर्दछ। यसको अर्थ हामीले उनिहरूलाई बाइबलको आधारभूत सत्यता सिकाउन सहयोग गर्नुपर्दछ। जस्तैः
मुक्ति - उनिहरू बचाइएका भएपनि उनिहरूमा प्रश्नहरू हुनसक्छन्। हामीले बाइबलबाट उनिहरूलाई बताइदिनुपर्दछ कि मुक्तिको निश्चयताको बारेमा बाइबलले वास्तवमा के भन्दछ। उनिहरूमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर जान्न सहायता गर्नुहोस् (कलस्सी ३:३/ यूहन्ना ३:१६)।
बप्तिस्मा - हामीले उनिहरुलाई बाइबलबाट देखाईदिनुपर्दछ कि परमेश्वर यसपछि के चाहनु हुन्छ। उनिहरुलाई देखाउनुपर्छ कि बप्तिस्मा के हो र हामीले किन यो गर्नु पर्दछ। यो ख्रीष्टको मृत्यू, गडाई, र बौरिउठाईको चित्रण हो र हामी यो परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुनलाई गर्नुपर्दछ (कलस्सी २:१२/ मत्ती ३:१५)।
(३) ख्रीष्टिय जीवन - हामीले उनिहरुलाई बाइबल बाट देखाईदिनु पर्दछ कि ख्रीष्टमा पाएको नयाँ जीवन पछि परमेश्वरले उनिहरुमा के आशा गर्नुभएको छ (२ कोरिन्थी ५:१७)। अनि उनिहरुको जीवन बाट उहाँ प्रभुमानै आदर ल्याइनुपर्दछ।
(४) साक्षीहरु - हामीले उनिहरुलाई बाइबल बाट देखाईदिनु पर्दछ कि सबै ख्रीष्टियनहरुमा येशू ख्रीष्टको बारेमा सबैलाई बताउने परमेश्वरको आज्ञा छ (प्रेरित १:८/ मत्ती २८:१९-२०) ।
ख. एउटा ख्रीष्टियनको रुपमा अरु ख्रीष्टियनहरु संग संगती गर्नु पनि हाम्रो काम हो (१ यूहन्ना १:७)। हामी उनिहरुलाई यसरी सहयोग गर्न सक्छौं:
(१) उहाँहरुलाई सम्मान गरेको महशुस गराउने। उनिहरुको लागि सबै कुराहरु नयाँ हुन्छन्। उनिहरुलाई थाहा हुनुपर्दछ कि उनिहरुले नयाँ परिवार पाएका छन् र हामीले उनिहरुलाई हामी भित्रका हौं भन्ने कुराहरुको अनुभव गराउनुपर्दछ।
(२) उनिहरुसंग समय बिताउने। उनिहरुसंग समय बिताउनाले उनिहरुले तपाईंलाई र तपाईंले उनिहरुलाई एकअर्कामा चिन्न सहयोग हुन्छ। उनिहरुसंग बढि समय बिताउनाले तपाईं प्रति उनिहरुको लगाव हुन्छ र यस बाट ख्रीष्टमा उनिहरुको परिवार मात्र नभएर साथीहरु पनि आउने संभावना हुन्छ।
(३) उनिहरुको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरसंग दैनिक उनिहरुको लागि आशिष माग्नुपर्दछ, उनिहरुको खाँचोको लागि र उनिहरुको कामहरुको लागि।
(४) प्रभुको सेवा गर्न उत्साह दिने। उनिहरुलाई थाहा गर्न दिनुहोस् कि उनिहरुको जीवनमा परमेश्वरको योजना छ र उहाँहरुलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ।
३. बर्नबासले अरु विश्वासीहरुको वास्ता गरे (प्रेरित १५:३६-४०/प्रेरित १३:१३):
क. जब बर्नबासले पावलसंग पहिलो यात्रा गरे, उनिहरुले उसको भान्जा मर्कूसलाई लिएर गएका थिए। कतै बाटोमा, मर्कूस घर फर्केकोले पावल खुशी भएन। यि पदहरुमा पावलले मर्कूसलाई अर्को मिशिनेरी यात्रामा लैजान ईन्कार गरेको छ, यसैले पावल र बर्नबास अलग अलग भएर गए र बर्नबासले मर्कूसलाई साथमा लिएर गए।
ख. एउटा ख्रीष्टियनको रुपमा कोही पापमा फस्दछ भने, हामीले उनिहरुको वास्ता गर्नुपर्दछ र परमेश्वरसंगको सम्बन्ध ठीक राख्नको लागि सहयोग गर्नुपर्दछ (गलाती ६:१)। हामी यो यसरी गर्न सक्छौं:
(१) उनिहरुसंग काम गर्ने त्यो समयसम्म जब सम्म उनिहरु परमेश्वरको लागि फेरि फाईदाजनक बन्न सकोस्। २ तिमोथी ४:११ मा, मर्कूस परमेश्वरको लागि र्फइदाजनक भएको छ। म विश्वास गर्दछु कि यो बर्नबासको कारणले गर्दा हो। बर्नबासले पक्कै पनि मर्कूसको पापलाई पछाडी छाडे र आउने कुरालाई हेरे।
(२) उनिहरुसंग बाइबल पढ्नुहोस र प्रार्थना गर्नुहोस्। यसले तपाईंको र उहाँको राम्रो सम्बन्ध रहनजान्छ। उनिहरुले उनिहरु प्रतिको तपाईंको प्रेम र उनिहरुले ठीक गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणालाई बुझ्नेछ।
बर्नबासले गरेको कुरालाई हामीले सोच्ने हो भने, पावलले ख्रीष्टियनहरुलाई स्विकार नगरेको र परमेश्वरको लागि असल प्रकारले काम नगरेको जस्तै देखिन्छ। हामीले पछि मर्कूसले मर्कूसको सुसमाचार लेखेको पनि पाएका छौं। परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यि दुबै मानिसहरुलाई बर्नबासको आवश्यकता थियो।
आज पावल र मर्कूस जस्ता ख्रीष्टियनहरु धेरै छन्। यो हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ कि हामीले यस प्रकारका ढलेका मानिसहरुलाई उद्धार गर्नुपर्दछ जो नयाँ छन्। यस संसारले तपाईंले गर्नुभएको कुराहरु कहिले पनि नदेख्ला, तर र्स्वर्गमा परमेश्वरले यसको लेखा राख्नुभएको छ र तपाईंले यसको ठूलो इनाम पाउनुहुनेछ।